Comedy – Categories – Channel Myanmar
Cloudy Days (2020)
Amazing Saturday (2021) Amazing Saturdayဒီတစ်ခါမှာတော့ CM ပရိသတ်ကြီးအတွက် Amazing Saturday ဆိုတဲ့ ရှိုးလေးကို တင်ဆက်ပေးပါရစေ"Amazing Saturday ဆိုတာ ဘယ်လိုရှိူးမျိုးလဲ??"ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုရီးယား အိုင်ဒေါတွေရဲ့ ထင်ရှား​ကျော်ကြားတဲ့ သီချင်းတွေကို မှန်အောင် ခန့်မှန်းရင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းက ထင်ရှားတဲ့ ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို မြည်းစမ်းခွင့်ရရှိတဲ့ ရှိုးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်SNSD မှ ထယ်ယောင်း SHINEE မှ ကီး တို့အပြင် အခြားသောထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်တာမလို့ ပရိသတ်ကြီးလည်း အိုင်ဒေါတွေကို ငေးလိုက် သီချင်းတွေကို ခန့်မှန်းရင်း ကိုရီးယားအစားအစာတွေကို သားရေကျလိုက်နဲ့ အတူ လိုက်ပါစီးမျောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်အညွှန်းကိုတော့ Shwe Pwint က ရေးသားပေးထားပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ CM Variety Team ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။File Size - 1.2 GB Quality - 1080p Duration - 1h 20min Subtitle - Myanmar(Hardsub) Genre - Reality-TV Translaotr - CM ...
Amazing Saturday (2021)
Kung Sanaeha (2022) Kung Sanaeha(2022) အပိုင်း (၂၁)"ဆန်းကြယ်သောဖူးစာ".........................................ရွာအကြီးအကဲသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာလစီကစွာတေးလန်ခေါင်းမာပြီး ဇာတ်ကိုအရူးအမူးစွဲလန်းနေသူဖြစ်တဲ့အတွက် ရွာမှာတမူထူးခြားနေသူဖြစ်ပါတယ်မာလစီက ဇာတ်မင်းသားချီဝမ်ကိုအလွန်မင်းသဘောကျတာကြောင့် ချီဝမ်ပါတဲ့ ဇာတ်ပွဲတိုင်းကို မလွတ်စတမ်းအားပေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးပါအမှုတစ်ခုအတွက်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းဖို့အတွက် ဇာတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လာရောက်အသွင်ယူနေတဲ့ ရဲမှူးလေမွန့်ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်မင်းသားရူးလေးမာစီနဲ့ ရဲမှူးလေးမွန့်တို့ ဆုံဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်သားဆုံလိုက်တိုင်း ဘုနဲ့ဘောက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်​နောက်ဆုံးမှာ သူမချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေးနဲ့ဆုံစည်းမှာလား.................ဒါမှမဟုတ် သူမနဲ့ဆုံလိုက်တိုင်း ဘုနဲ့ဘောက်ဖြစ်နေတဲ့ ရဲမှူးလေးနဲ့ပဲ ဖူးစားဖက်ဖြစ်သွားမှာလား................. CM ကဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမယ့် "ဆန်းကြယ်သောဖူးစာ" ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ကြည့်ရှု့လိုက်ကြရအောင်Aired: May 27 , 2022 Aired On:Mon to Fri Genres: Romance , Comedy Duration: 50mins Episodes:30 File Size: 1080p(~700MB) Translated by Phyoe & Sai Tom Kham Encoded by PinkPloyEpisode 1 (700MB)UsersDrive / Yoteshin / StreamSB / Mega / VIPEpisode2(700MB)UsersDrive / Yoteshin / StreamSB ...
Kung Sanaeha (2022)
My Romance From Far Away (2022) My Romance From Far Away (2022) အပိုင်း (၂၄)ကောင်းကင်ဖန်ဆင်းသောချစ်ကြိုး ----------------------------------------------ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "Aom Fah Oab Din" ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ ထိုင်းကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ချင်းမိုင်ကို သွားတဲ့လမ်းမှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပြီး ပွဲချင်းပြီး ဆုံးပါးသွားတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်၊ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား ကံဆိုးတယ်ပဲ ပြောရမလား သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်သူကတော့ ခရီးမှာပါမသွားဘဲ အိမ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူရဲ့ အစ်ကို Khunkhao ဟာ သားလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ တာဝန်ယူရင်း...တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူရဲ့ အဖေက သူ့မြေးကလေးကို ပြန်ခေါ်ချင်တာနဲ့ သမီးဖြစ်သူ Thofah (ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ)ကို လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။တူဦးရီးအရင်း တော်စပ်တဲ့ Khunkhao၊ တစ်ဖက်ကလည်း တူအဒေါ်အရင်းတော်စပ်တဲ့ Thofah.... နှစ်ယောက်သား တူလေးကို ပျိုးထောင်ဖို့ လုရင်း ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။Casts တွေကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ခန့်ချောမင်းသား Puen Khanin Chobpradit နဲ့ Praomook ...
Oops! Mr.Superstar Hit on Me(2022) Oops! Mr. Superstar Hit On Me! (2022)အပိုင်း (၄) ============================ အာရှတစ်ခွင်မှာ နာမည်ကြီးစူပါစတားဖြစ်တဲ့ တွန် နာရူဘတ်ဆိုတဲ့မင်းသားရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ကိတ်တစ်ယောက် အလုပ်သင်မိတ်ကပ်ပညာရှင် အနေနဲ့ အလုပ်ဝင်ခွင့်ရသွားတဲ့အခါမှာကိတ်တစ်ယောက် သူ့အမေရဲ့ အကြိုက်ဆုံးမင်းသားဖြစ်တဲ့ တွန်ကို သွားပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းရာကနေ မင်းသားနဲ့တူတူ အိပ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ထက် အသက် အနှစ် ၂၀ လောက်လည်းကြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့ တွန်က တကယ်ပဲ ကိတ်ကိုချစ်မိသွားတာလားကိတ်ကရော ရှုပ်ထွေးလှတဲ့အနုပညာလောကထဲ အခုမှ အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းဖြစ်လာပြီး ဒီကိစ္စကြီးကို ဘယ်လိုရှေ့လျှောက်ဖြေရှင်းမလဲနှစ်ယောက်သားရဲ့ အချစ်လမ်းခရီးကရော လူသိရှင်ကြား ဖော်ထုတ်ပြပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူကြပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါတွန် နေရာမှာ မင်းသားကြီး Pong Nawat နဲ့ ကိတ် နေရာမှာတော့ GMM က Sizzy အဖွဲ့ဝင် ချစ်စရာ Jane တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီးSupporting အနေနဲ့လည်း BadBuddy ထဲက အားလုံးရဲ့ မမ Milk တို့ NotMe ထဲက ပြည်သူ့ရဲကိုကို Gawin ...
Oops! Mr.Superstar Hit on Me(2022)
Only Murders in the Building (2022) – Season 02 Only Murders in the Building (2022) - Season 02 =========================== IMDb Rating - 8.1/10Season 01 မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ခုအညွှန်းက Spoilerတွေ ပါပါတယ်။ Season 01 >>> Click Here *********************************** ဝါရင့် အနုပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Steve Martin နဲ့ Martin Short တို့ ပါ၀င်တာကတစ်ကြောင်း၊ Selenators တို့ရဲ့ အချစ်တော် Selena Gomez ပါ၀င်နေတာကတစ်ကြောင်း မထွက်ခင်ကတည်းက ခေတ်ထနေတဲ့ စီးရီးပါ ။ (၁၀) ပိုင်းပါ၀င်ပြီး ပွဲဦးထွက် ၂ ပိုင်းထွက်ချလာပါတယ်။စုံထောက်ကြီး3ယောက်ပြန်လာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ စီစန် အဆုံးသတ်မှာ ပြဿနာရှင်းပြီလို့ ယူဆရင်း အောင်ပွဲခံနေတဲ့ မေဘယ်၊ ချားလ်နဲ့ အိုလီဗာတို့ ပြီးအောင်တောင် မပျော်လိုက်ရဘဲ ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့သွားတာကို မှတ်မိကြသေးရဲ့လား မသိဘူး....အခုတော့ အဲဒီ ဒုက္ခရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ စီစန်2...
TMDb: 8.6/10 620 votes
Only Murders in the Building (2022) – Season 02
Only Murders in the Building (2021) – Season 01 Only Murders in the Building (2021)==========================IMDb Rating - 9.5/10ဝါရင့် အနုပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Steve Martin နဲ့ Martin Short တို့ ပါ၀င်တာကတစ်ကြောင်းSelenators တို့ရဲ့ အချစ်တော် Selena Gomez ပါ၀င်နေတာကတစ်ကြောင်း မထွက်ခင်ကတည်းကခေတ်ထနေတဲ့ စီးရီးပါ ။ အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါ၀င်ပြီး ပွဲဦးထွက် ၃ ပိုင်းတောင် ထွက်ချလာပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်း −Charles, Oliver နဲ့ Mabel Mora တို့ဟာ Upper West Side က ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာ ဘ၀ ကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နေသူတွေပါ။ တစ်နေ့ သူတို့နေတဲ့ ကွန်ဒိုမှာ လူသေမှုတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလူကမသေခင် တစ်နာရီကမှ သူတို့ ၃ ယောက်နဲ့အတူ ဓာတ်လှေကားတူတူစီးသွားသူရယ်ပါ။ ရဲတွေကတော့ တွေ့ရှိလာတဲ့သက်သေတွေအရ ...
TMDb: 8.3/10 200 votes
Only Murders in the Building (2021) – Season 01
Cleaning Up (2022) Cleaning Up (2022) ===============ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ 2019 မှာ လွှင့်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး UK TV Series "Cleaning Up" ရဲ့ Remake K drama စီးရီး အသစ်လေး လာပါပြီ။ Eo Yong-Mi (Yum Jung-Ah), An In-Kyung (Jeon So-Min) နဲ့ Maeng Soo-Ja (Kim Jae-Hwa) တို့သုံးယောက်ဟာ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။- Eo Yong-Mi ကတော့ သမီးနှစ်ယောက်ကိုပျိုးထောင်ပေးရင်း ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရသူပါ။- An In-Kyung ကတော့ Food Truck လေးဝယ်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ဖို ရည်ရွယ်ထားသူပါ။- Maeng Soo-Ja ကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ထင်ရ ပေမယ့် လူတွေကို သူလိုအပ်မှ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတတ်သူပါ။ဒီသန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း ၃ ယောက်က သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အမှတ်မထင်ကြားခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲဖို့ အတွက် ...
TMDb: 8.0/10 1200 votes
Erkenci Kus (2018) Daydreamer Erkenci Kuş (Early Bird) (Daydreamer)CM Drama Romance ပရိသတ်တွေအတွက် ကမ္ဘာ​ကျော်သွားခဲ့တဲ့ တူရကီ အချစ်ရိုမန့်စီးရီးလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်​ပေးပါရ​စေ....မင်းသားချော Can Yaman နဲ့ မင်းသမီးချော Demet Ozdemir တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Erkenci Kuş ဆိုတဲ့ စီးရီးလေးပါ။IMDb Rating (7.3) ထိ ရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက မိန်းကလေး ပရိသတ်များအကြား ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ Best Romantic Comedy TV series ဆုကိုလဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်...Can Yaman နဲ့ Demet Ozdemir တို့ကို အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ တူရကီစုံတွဲသရုပ်ဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြတဲ့အထိ ဒီစီးရီးမှာ သူတို့နှစ်ယောက်က အသက်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လဲ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အရိုခန်းတွေက ကြည့်ရှုသူတွေကိုပါ ကြည်နူးပြုံးပျော်လာစေတာမျိုးပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းက​တော့....​အောင်မြင်တဲ့ စာ​ရေးဆရာမဖြစ်ချင်သူ Sanem တစ်​ယောက် ဘယ်အလုပ်ကိုမှ ၃ပတ်ထက် ပိုမခံခဲ့ပါဘူး အ​​ဖေဖြစ်သူရဲ့ ...
TMDb: 8.0/10 39 votes
Erkenci Kus (2018) Daydreamer
Another Miss Oh(2016) Another Miss Oh(2016) ဇာတ်လမ်းတွဲ**********************************အပိုင်း ( ၁ မှ ၁၈) ထိ စ/ဆုံးWHY HER (2022) ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မမ အိုဆူဂျယ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ ဒီစီးရီးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ သူမရဲ့အကောင်းဆုံးစီးရီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လို့အားပေးတဲ့သူလည်း များပြားလှပါတယ်...ဒါ့ကြောင့် CM ကနေ ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံး 1080Pလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာမို့ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ခံစားချင်သူများအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်...ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ သူမက မင်္ဂါလာဆောင်ခါနီး တစ်ရက်အလိုမှာတင်သတို့သားနဲ့ သတို့သားနဲ့ ခွာပြဲခဲ့တာကြောင့် မိသားစုအသိုင်းအဝန်းကြားမျက်နှာပျက်ခဲ့ရပါတယ်...ဒါ့အပြင် အလုပ်မှာလည်းအဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကောင်မလေးပေါ့...ဒီလိုကံကြမ္မာဆိုးဟာ တကယ်တော့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး...ဒီလိုယောင်္ကျားနဲ့ဆုံဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့...ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ရယ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိသလိုသနားရ ဝမ်းနည်းရ ကြည်နူးရနဲ့မို့ ရသစုံလင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်...မင်းသား,မင်းသမီးတွေကလည်းနာမည်ကြီးတွေမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး..Episodes: 18Aired: Jun 10, 2022 - Jul 23, 2022File Size: 1.4GB & 500MBQuality :Web-DL 1080p,720pGenres: Comedy, Romance, LifeTranslated by Hnin Wut Ye,ChitThe, Estel,So Ri,Thynn ...
TMDb: 8.2/10 152 votes
Another Miss Oh(2016)
Running Man Running Man --------------------------------------------------------------------------------- Running Man ဆိုတာကတော့ ...... တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက ဥရောပနိုင်ငံများပါမကျန် လူသိများတဲ့ ရသစုံလင် Reality Show အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ Hollywood အနုပညာရှင်တွေ၊ ကိုရီယားနာမည်ကြီး အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်များစွာနှင့်အတူ နာမည်ကြီးအထင်ကရနေရာတွေမှာ မစ်ရှင်တွေပြီးမြောက်အောင် ယှဥ်ပြိုင်ကြရမှာပါ… ယူဂျယ်ဆော့၊ဂျီဆော့ဂျင်၊ကင်ဂျုံးဂု၊ဂန်ဂယ်ရီ၊ဆောင်းဂျီဟို၊ ဟားဟား၊လီဂွမ်ဆူ၊ဆောင်းဂျွန်ကီ၊လစ်ဇီ တို့နှင့် ပွဲထွက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်.. ထို့နောက် ရိုက်ကူးရေးအပိုင်း (၄၀) ကျော်လောက်မှာ ဆောင်းဂျွန်ကီ နှင့် လစ်ဇီတို့မပါဝင်တော့ပဲ ကျန်အဖွဲ့ဝင် (၇)ဦးဖြင့်ဆက်လက် ရိုက်ကူးရာ (Running Forever) “7012” ဆိူပြီးကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်… အပိုင်း(၃၂၄) ပြီးနောက် ဂယ်ရီထွက်သွားပြီးနောက်အပိုင်း(၃၄၆) တွင် ဂျင်ဆိုမင်းနှင့် ယောင်းဆယ်ဂျန်းတိူ့နှင့် ယနေ့ချိန်ထိဆက်လက်ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်… Channel Myanmar အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ အပိုင်း ၅၃၃ ကနေ စပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ Running Man ပရိတ်သတ်များ စောင့်မျှော်ကြပါဦးဗျာ File Size - 1GB Quality - 1080P Subtitle - Myanmar (Hardsub) Translator - August, Jerrica, MTA, Shwe ...
TMDb: 8.2/10 57 votes
MAMA GOGO(2022) MAMA GOGO(2022) အပိုင်း (၃)............................................... အညွှန်း ကဲ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချိုအီနေတဲ့အချစ်ကားလေးတွေပြီးတော့ ကောင်ချောလေးတွေကို တစ်ဝကြီးငမ်းရမဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ဇာတ်ကားလေးကို CM က တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဗျခေတ်မရှိ၊ နာမည်မကြီးတော့တဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ညဈေးမှာ ဈေးရောင်းနေရတဲ့ "အန်နီ"စိတ်ပျက်စရာအတိဖြစ်နေပြီး အဆင်မပြေတဲ့ဘဝထဲကို တစ်နေ့မှာတော့ အံ့အားသင့်စရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပေါ်လာပါတော့တယ်အဲဒါကတော့ ဦးလေးဖြစ်သူဆီကနေ "Papa Gogo" ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖွင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘားတစ်ခုကို အမွေရလိုက်တာပါပဲတစ်လ တစ်လကို ဘတ်သန်းချီပြီးရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘားတစ်ခုဆိုတာ သိလိုက်ရလေတော့ "Mama Gogo" နာမည်နဲ့ ဘားကလပ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ ကြံရွယ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ သူဖွင့်မဲ့ဘားက ကောင်မလေးတွေနဲ့ လူတွေကိုဆွဲဆောင်မှာမဟုတ်ဘဲ ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်လေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်လေတော့ ကောင်ချောလေးများ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရလေသတည်းပေါ့အဲလိုရှာပုံတော်ဖွင့်ရာက ဘယ်လိုကိုယ်တော်ချောတွေ ဘားကိုရောက်လာမလဲ သူတို့ကရော ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်မလဲ၊ သူဦးစီးပြီးလုပ်ကိုင်တဲ့ ဒီဘားကလပ်ကရော အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား ဘာအခက်အခဲတွေ ဆက်ပြီးတွေ့ကြုံရမလဲဆိုတာကို အခွီပေါင်းတစ်သိန်းနဲ့ ကြည့်ရမဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်ချောတစ်သိုက်ရဲ့ Sexy ကျမှုတွေကို ငမ်းရင်း သူတို့ရဲ့အလွဲပေါင်းတစ်သိန်းကိုပါ ကြည့်ပြီးခွီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကားလေးကို ရွေးပါလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီကားထဲက ကိုယ်တော်ချောလေးတွေကို ငမ်းလို့ရမဲ့နေ့...အဲ...ကြည့်ရှုခံစားလို့ရမဲ့ နေ့ရက်ကတော့ June 12 ကစ အပတ်စဉ် Sunday တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ ဒါဆို Super ...
Knowing Brother Knowing Brothers (2015-Present)ဒီ Variety Show လေးက​တော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Knowing Brothersကျောင်း​တော်ကြီးရဲ့ ကျောင်းသားများဟာ အပတ်စဥ် ကျောင်း​တော်ကြီးဆီ​ရောက်လာတဲ့ကျောင်း​သားသစ်​လေးတွေကို ကြိုဆိုဧည့်ခံကြပြီး ဂိမ်း​တွေအတူ​​ဆော့ Quiz တွေ အတူ​ဖြေကြတဲ့ Variety Show လေး တစ်ခုပါ။Channel Myanmar မှလည်း ဒီအစီအစဥ်​လေးကို တင်ဆက်​ပေးလာခဲ့တာ ရက်သတ္တပတ် ၇ပတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်​ပေးလာရင်းနဲ့ ကြည့်ရှုအား​ပေးသူများပြားတဲ့ အစီအစဥ်​လေးမို့လို့ Knowing Brothers Show မှာHit ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ အပိုင်း​ဟောင်း​လေး​တွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်​ပေးဖို့ CM Variety Team မှ စီစဥ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ Kpop လောကမှာကြီးစိုး​နေကြတဲ့ BTS, BlackPink, EXO, Twice, Seventeen, ITZY စတဲ့ နာမည်ကြီးအဖွဲ့​တွေအပြင်တခြားအဖွဲ့​ပေါင်းများစွာရဲ့ကျောင်း​တော်ကြီးဆီ လာ​ရောက်လည်ပတ်တုန်းက အပိုင်း​​တွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်​ပေးမှာမို့CM ပရိသတ်ကြီးများက မျှော်​လင့်​စောင့်စား​​ပေးရုံပါပဲ။အပိုင်း​ဟောင်း​တွေကို တင်ဆက်​ပေးရင်း အပတ်စဥ်ထွက်ရှိ​နေတဲ့ အပိုင်းသစ်​​တွေကိုပါ မပြတ်မလတ်အ​ကောင်းဆုံး ...
The Flight Attendant (2020-2022) လေယာဉ်ပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ နိုင်ငံတကာကို အမြဲတမ်းသွားလာနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါပဲ ဘဝကြီးကနေတတ်ရင်ပျော်စရာကြီးလို့ဆိုကြသလိုရောက်ရာနိုင်ငံမှာ သောက်စားပျော်ပါးပြီး သတိလွတ်သွားတဲ့အထိသောက်တတ်တဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်း ကတ်ဆီ ကတော့ တစ်နိုင်ငံရောက်တစ်ယောက်နဲ့သုခဘုံမှာပျော်မွေ့နေတဲ့တစ်ယောက်ပါအဲဒီလိုနဲ့ ဘန်ကောက် သွားရမဲ့လေယာဉ်နဲ့ပါသွားပြီး လေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိသွားတာကနေညစာအတူစား ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ညအတူအိပ်ရင် နိုးလာတဲ့အခါမှာတာ့သူနဲ့အတူ အိပ်ခဲ့တဲ့သူက လည်ပင်းလှီးခံရပြီး သေနေတာကိုတွေ့ခဲ့တော့တာပါပဲသုခဘုံကနေ ရုတ်တရက်ကြီး ငရဲပြည်ရောက်သွားသလို သူ့ဘဝလေးဟာလဲဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရတော့တာပေါ့ သူကလည်း သောက်ပြီဆိုရင် ဘာမှမသိအောင်မူးတဲ့အထိသောက် ဟိုတယ်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေးကလည်း ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လူသတ်တရားခံကို ဖော်ထုတ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲသူမသတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့ စတင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲ ပြဿနာတွေသဲလွန်စတွေ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တစ်စစီ တစ်စစီ ဆွဲထုတ်မိရင်း……ပျော်စရာ ရင်ခုန်စရာ ခွီစရာတွေနဲ့ ကြည့်ရင်းနဲ့ကို အတက်အကျမြန်လို့တကယ့်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး တစ်ကားတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်File size…378 Mb Quality…. 720p Format…mp4 Duration….48 min Genre..Drama / mystery / Comedy- Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Mr. Anderson Translated by Garfield Episode 1 VIP / Yoteshin / Megaup / Meganz / ...
TMDb: 7.5/10 322 votes
The Flight Attendant (2020-2022)
The Lost Soul (2022) The Lost Soul (2022) စ/ဆုံး"ချစ်ရတဲ့ ဝိညာဉ်မလေး" Pang SanaehaCasts:တေချစ် အဖြစ် ‌Ko Vasin ပရိုင်‌ဒေါင်/ဆိန်ဝမ်အဖြစ် Pinkploy Paparwadee ဆီ‌ထောင်းအဖြစ် Maggi Apa ‌‌‌ပေါလ် အဖြစ် Off Chanapolဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့....မိမိကိုယ်ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါ မှန်းမသိ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိ လေလွင့်နေတဲ့ ဝိညာဉ် မလေး ဆိန်ဝမ်....မဟုတ်မခံ နိုင်ငံကြီးသားပီပီ အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက် မိန်းမနဲ့ ကလေး အသတ်ခံရတဲ့အမှုကို မဖော်နိုင်တဲ့အပြင် တရားခံကိုပါမဖမ်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ရဲအရာရှိ တေချစ်တစ်ယောက် အကုန်လုံးကိုစိတ်ကုန်ပြီး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူဆီရဲ့ ဟိုတယ်ကို ခဏတစ်ဖြုတ် အနားယူဖိုလာရင်း လေလွင့်နေတဲ့ဝိညာဥ်မလေးဆိန်ဝမ်ကို မထင်မှတ်ပဲ တွေ့လိုက်ရတယ်ဝိညာဥ်မလေး ဆိန်ဝမ်က မိမိအကြောင်းကိုပိုသိချင်လို တစ်ဦးတည်းသောလူသား ရဲအရာရှိတေချစ်ပဲ သူ့ကိုမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ ......?အချင်းချင်းရင်းနှီးသိကျွမ်းပြီး တေချစ်က ဝိညာဥ်မလေး ဆိန်ဝမ်ကိုကူညီရင်း လူသားနဲ့ဝိညာဥ်ကြားကအချစ်တွေဘယ်လိုပေါက်ဖွားလာမလဲ...?ဝိညာဥ်အဖြစ်နဲ့နေရတဲ့ ဆိန်ဝမ်ကရော ဘယ်သူလဲ?ချစ်စရာကောင်းသောဝိညာဥ်မလေး ဆိန်ဝမ်ကလည်း ဝိညာဥ်အဖြစ်နဲ့ တစ်သက်လုံးနေသွားမှာလား...?ရဲအရာရှိ တေချစ်ရဲ့ မိန်းမနဲ့ကလေးရော ဘယ်သူ့လက်ချက်ကြောင့်သေသွားတာလဲ....?လျှိဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သရဲကားမျိုးမဟုတ်ပဲ Romance ဆန်ဆန် လူသားနဲ့ ...
SPY x FAMILY (2022) Spy X Family (2022)သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ Anime စီးရီးတခုပါပါ IMDB Rating အနေနဲ့ 9.1/ 10ကို User 1.5kထိပေးထားပြီး အတော်လေးခွီရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပါပဲ....ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သိပ်ကိုတော်တဲ့ စပိုင်တစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ပေါင်းများစွာဖျက်ပြီး မစ်ရှင်တွေကို တခုပြီးတခုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ် သူ့နာမည်ဝှက်ကတော့ "ဆည်းဆာ"ပါ.... တနေ့တော့ သူ့အတွက်မစ်ရှင်ကို ကုတ်ဖော်ပြီး သူရလိုက်တဲ့မစ်ရှင်က စောင်တလွဲဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမစ်ရှင်က သူကလေးတစ်ယောက်ကို တပတ်အတွင်းမွေးပြီး သူစပိုင်လုပ်ရမယ့် လူကြီးတစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ကျောင်းမှာ သတင်းသွားယူဖို့ပါပဲ....အမြဲတမ်းကမ္ဘာကြီးကိုလျှို့ဝှက်စွာကယ်တင်နေတဲ့ ဆည်းဆာတစ်ယောက် မိဘမဲ့ဂေဟာကနေ ကလေးတစ်ယောက်ကို အလွယ်တကူမွေးစားလိုက်ပြီး အဲ့ဒီကလေးက သာမန်မဟုတ်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အလွဲအချော်တွေနဲ့ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက် သွားဦးမလဲဆိုတာကို Action / Comdeyအပြည့်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်........... File Size –300MB / 150MB @EpisodeQuality –1080p / 720pDuration – minute (@Episode)Total Episodes: N/ASubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Animation / Action / ComedyTranslator – VentiEncoder – YK VIP Member ...
Miracle (2022) Miracle (2022) အပိုင်းသစ် ၁ နှင့် ၂(1080p ကြည့်လို့ရပါပြီ) အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Idol လေး လူးဝစ် ... သူ့ရဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ သီချင်းကောင်းတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အီဆိုရင်းကတော့ လူးဝစ်ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ လူးဝစ်လို Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက် မက်နေသူလေးပေ့ါ။နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လူးဝစ်ဟာ သူ့ရဲ့ အေဂျင်စီနဲ့ မန်နေဂျာ ရဲ့ ပိုမို တင်းချုပ်ချယ်ခြင်း ခံလာရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယား ပြန်ရောက်တုန်းလေး လျှောက်လည်ချင်လို့ လူးဝစ်တစ်ယောက် ဟိုတယ်ကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့ လူးဝစ်နဲ့ အီဆိုရင်းတို့ ဆုံတွေ့ပြီးနောက် ဘယ်လို Miracle တွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါဦးရှင်။ (အညွှန်းကိုတော့ Hay Thar Oo က ရေးပေးထားပါတယ်။) Aired: June 24, 2022 -- Aired On: Friday, Saturday Genres: Drama, ...
Man Vs Bee (2022) Man Vs Bee (2022) Complete Limited Series IQ 178 ရှိတဲ့ စူပါဂျီးနီးယပ်စ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရို၀န်အတ်ကင်ဆန်ရဲ့ တစ်ကျော့ပြန် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို Netflix ကနေ အစအဆုံး တစ်သုတ်တည်း ထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုဝန်အတ်ကင်ဆန်ရဲ့ Johnny English Strikes Again ကားကို ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကပဲ ရိုက်ထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်အကြိုက်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲကြပေမဲ့ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက Legend တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချာလီချက်ပလင်ကို မကြိုက်တဲ့သူမရှိသလို သူ့နောက်တစ်ခေတ်မှာလည်း တွမ်အန်န်ဂျယ်ရီကို မကြိုက်တဲ့သူမရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်‌တော်တို့ မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ ဟာသ Legend ကြီးကတော့ မစ္စတာဘင်းန်ပါပဲ။ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို မကြိုက်တဲ့သူမရှိတာ သေချာပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်အတိုင်းပဲ၊ လူနဲ့ပျား အကြိတ်အနယ်ဆော်ကြတဲ့ဇာတ်ပါပဲ။ ခင်ဗျားအိမ်ထဲ ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ် ပျားတစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ် ၀င်ပြီး ပြန်ထွက်မရဖြစ်နေတာကြုံဖူးမှာပေါ့။ အ၀တ်နဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက် မောင်းထုတ်လိုက် လုပ်ပေမဲ့ အေဘေးက မထွက်တာလည်း ...